Breakfast - kuyisisekelo ngosuku. Futhi enhle kungaba ukuqala semolina eliphekwe multivarka "Redmond." Phela, ekhishini, singamakhosikazi emizi eziningi ungabona umsizi Irreplaceable.
Ngilusizo noma eyingozi empilweni yomuntu semolina
Ngo cereal, njengabo semolina, zikhona abalandeli abaningi nabaphikisi. Noma kunjalo, lena isidlo esikhulu ekudleni. I iqolo inamaprotheni, isitashi, amavithamini namaminerali abalulekile. Odokotela batusa ukwethula ke ekudleni kwakho abantu abanale yizifo ezihlobene nokungabikho ukuphazamiseka pheshana emathunjini. Lokulingene ukusetshenziswa semolina engenzeka ukucindezela izinhlungu zibe of kolwelwesi kanye nezilonda. Lokhu dish kuyasiza abantu ibhekane nokuvuselelwa ngemuva kokugula isikhathi eside, isimo sabo njalo ukukhathala kanye namahlamvu esaba namandla alahlekile.
Ever kusukela ebuntwaneni, safundiswa ukuthi semolina iphalishi ewusizo nokunomsoco ukuze sibe nomzimba ezikhulayo. Kwatholakala ukuthi lokhu akulona iqiniso. Ochwepheshe batusa ukuba izingane ezisanda kuzalwa. Grudnichka ngoba umzimba ongakabi ukwazile inhlabamkhosi carbohydrate ukuthi ezicebile. Ukuba khona phytin e semolina ingaba yingozi, njengoba kungenalo ukumuncwa kwe-calcium, vitamin D ne-potassium emzimbeni. Kule ndaba, ke esibuthaka sokuzivikela ezifweni futhi ngimpofu othuthukayo zemisipha uhlelo ingane. I iqolo futhi gluten samanje evimbela ukusebenza evamile ye emathunjini. Odokotela bezingane belulekwa ukuba uqale ukunika izingane semolina nge iminyaka emithathu kungekho kuka kabili ngesonto.
Cereal ihlanganisa kahle neminye imikhiqizo eminengi enomsebenzi, ezifana amajikijolo, uju, amantongomane, izithelo nokunye. Ungakwazi ngumnikazi ezihlukahlukene izitsha ukuze ungeze ukunambitheka yimuphi isithako.
Amathiphu iphalishi Ngokufanele eliphekwe multivarka
Ngaphambi kokuthi uqale ukupheka lokhu isidlo, ukufunda izincomo ezimbalwa:
- Ukuze ubisi uye engavuswanga, hlambulula ngamanzi. Thatha lezi izithako isilinganiso esisodwa komunye noma gcoba odongeni ibhotela inkomishi.
- Ukuze uthole ketshezi semolina e multivarka, uthele ubisi noma amanzi ngaphansi kuka elicacisiwe iresiphi.
- Ukuze Ukukhanya Okuholela it is hhayi anamathela phansi isitsha, ibhulashi ngamafutha ufafaze breadcrumbs.
Uma usebenzisa lezi zincomo, uthola isidlo esimnandi futhi ithenda kakhulu.
I ipuleti kangcono multivarka
Kukhona ezinye izinzuzo ukupheka multivarka:
- Ngenxa uhlelo "Ukushisa" kungaba isikhathi eside ukugcina efudumele isidlo.
- In multivarka kukhona umsebenzi "ukupheka Ibambezelekile", lapho ufuna ukugcwala zonke izithako endishini, wafaka esifanele, futhi okomhlatshelo semolina eside esimisiwe usulungile.
- Inzuzo ebaluleke kakhulu - ke yinto akadingi ngime eceleni pan futhi njalo ushukumisa iphalishi, ukuze singathwesi engimbumbile Clumps. Futhi buthule hambahamba ibhizinisi labo. Ngemva semolina e "Redmond M90" ukulungele ngaphandle kwakho iqhaza. Udinga nje ukubeka endishini izithako, ukuhlela isimo oyifunayo nezikhathi. Ngemva kwemizuzu embalwa isidlo usulungile.
semolina Dairy e multivarka
Ukuze wenze lokhu isidlo uzodinga usizo "Redmond" futhi uhlu izithako ezilandelayo (ngalinye ekukhonzeni):
- ushukela granulated (20 g);
- Ubisi (ezinhlanu multistakanov);
- ibhotela (ngokuzikhethela okukodwa yakho);
- semolina (20 grams);
- usawoti (10 grams).
Thatha isitsha, gcoba it ngamafutha. Khona-ke uthele ubisi ukuze multistakanami. Hlanganisa eceleni oluthile lokudla, usawoti kanye noshukela. Ingxube Ngaleso sikhathi wayehlala batheleka ubisi. Silicone spoon ugovuze kahle ukugwema izigaxa kwakhiwa. Khetha "Ubisi iphalishi" Imodi. Hlela isikhathi - imizuzu engaba yishumi. Njengoba isikhathi zahlelwa ibalwa ukupheka Imininingwane okusanhlamvu. Chofoza "Qala". Vula ikhava ngemizuzu emihlanu futhi mix abicah spatula iphalishi. Vala futhi ibila kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Kanjani ngeke Beep Beep, semolina e multivarka "Redmond" ukulungele. Ungakwazi uyibambe imizuzu emihlanu noma ngokushesha silisebenzise ipuleti, engeza ucezu ibhotela. Ungakwazi ukuhlobisa ngisho semolina izithako amnandi: apula, izithelo ezomisiwe, amajikijolo, omisiwe uju.
Semolina e multivarka "Redmond" ngaphandle ubisi
Ekulungiseleleni izitsha ngokusebenzisa amanzi esikhundleni ubisi. ingaphinda isetshenziswe ketshezi, kanye nesobho ahlukahlukene. Lapho uya ukulungiselela avalele-free iphalishi, okusanhlamvu kanye amanzi ukuthatha izinga elilodwa kuya kwamathathu. Inqubo ukupheka iyafana webele iphalishi. Lokhu dish ziyahlukahluka okulandelayo izithako - inyama, okusabhontshisi, amakhowe, amantongomane. Lolu hlobo iphalishi okulungiselelwe esimweni lapho ubisi ukusetshenziswa engathandeki. Ngokwesibonelo, umuntu iguliswa imikhiqizo yobisi noma abe ukuntula lactase.
Semolina e "Redmond" multivarka kuvela esihlwabusayo kakhulu futhi ithenda. Futhi okubaluleke - ngaphandle ifilimu kanye izigaxa, futhi akudingeki ukuba ame isitofu ugovuze njalo. Ujabulele ukudla kwakho!
Ezinye izindlela, efana namazambane ephekwe ucwecwe kuhhavini
Uphenyo incwadi ethi "The Scarlet Ulibangisa". "Scarlet Ulibangisa": nabalingiswa abasemqoka, isifinyezo
Izinhloso ubudlelwane zomthetho
Croup kwamanga izingane: izimpawu kanye impande izimbangela
Indlela ancibilike ushokoledi ukwenza kube liquid ayigongobali?
On iziphi izinhlobo imililo
Isidakamizwa "Ranitidine": izinkomba zokusetshenziswa, ukwakheka kanye nezakhiwo
Izitatimende ethakazelisayo movie